Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ပေါက်​တောတွင် ​လှေ​မှောက်၊​ လူ ၄၀ နီး​ပါး​ ​သေဆုံး
ပေါက်​တောတွင် ​လှေ​မှောက်၊​ လူ ၄၀ နီး​ပါး​ ​သေဆုံး
ရခိုင်ပြည်နယ် ​ပေါက်​တောမြို့​နယ်ဘက်က​နေ စစ်​တွေမြို့​ဘက်ကို လာတဲ့​ ဘင်္ဂါလီ​လှေတစီး​မြုပ်လို့​ လူ ၄၀ နီး​ပါး​ အသက်ဆုံး​ရှုံး​ခဲ့​တယ်လို့​ စစ်​တွေမြို့​ခံတဦး​က ​ပြောပါတယ်။
ဒီလ ၇ ရက်​နေ့​က ​လှေနစ်မြုပ်တာ ဖြစ်တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။ ဒီလူ​တွေဟာ အ​ရေး​အခင်း​ဖြစ်တုန်း​က စစ်​တွေက​နေ ​ပေါက်​တောမြို့​နယ်ဘက်ကို ထွက်​ပြေး​ တိမ်း​ရှောင်ပြီး​ ပိုက်​ကျေး​ပြင် မွတ်ဆလင်ရွာမှာ သွား​ရောက်ခိုလှုံကြရာက အခုအခါ စား​ရေရိက္ခာ ပြတ်လတ်လို့​ ပြန်လာကြတာလို့​ ဆိုပါတယ်။
အ​ဖြောင့်​အား​ဖြင့်​ ငါး​မိုင်ခန့်​သာ ခရီး​ရှိ​ပေမယ့်​ ​ရှောင်ကွင်း​မောင်း​နှင်ကြရာက ​လှေ ၁၀ စီး​အနက် ၉ စီး​က စစ်​တွေမြို့​က မွတ်ဆလင်​တွေကို ထား​ရှိတဲ့​ သဲ​ချောင်း​ကျေး​ရွာကို ​ရောက်ရှိတယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
“စစ်​တွေ့​မြို့​ကို လာတဲ့​အခါ သူတို့​က ပင်လယ်ဘက်က ပတ်ပြီး​ လာရတယ်။ နီး​နီး​လေး​ပါ။ သူတို့​နေတဲ့​အရပ်နဲ့​ သူတို့​လာတဲ့​အရပ်က ငါး​မိုင်​လောက်အထိ ​ဝေး​မယ်။ သူတို့​က သဲ​ချောင်း​ကိုလာတာ။ သဲ​ချောင်း​က မွတ်ဆလင်ရွာကို လာတာ။ ပင်လယ်နား​မှာရှိတာ ဒါ​ပေမယ့်​ ​ချောင်း​ထဲ ဝင်ရတယ်။ အဲဒီ​ချောင်း​ထဲ အဝင်မှာ ​ရေအား​နည်း​နည်း​ ကြမ်း​တယ်ဗျ။ စက်​လှေ​မောင်း​တဲ့​သူက မကျွမ်း​ကျင်ရင် ဝင်လို့​မရဘူး​။ အခု အဲဒီလို ဖြစ်သွား​တာ။ ​ချောင်း​ထဲဝင်တဲ့​အဝမှာ ​မှောက်သွား​တာ။”
မွတ်ဆလင်တဦး​ကလည်း​ သူတို့​အသိ်ုင်း​အဝိုင်း​မှာ ကြား​သိတယ်လို့​ ​ပြော​ပေမယ့်​ အာဏာပိုင်​တွေထံက​တော့​ သီခြား​အတည်မပြုနိုင်​သေး​ပါဘူး​။
သံတွဲမြို့​က နည်း​ပညာတက္ကသိုလ်ကို​တော့​ အခုလ ၇ ရက်​နေ့​ ကတည်း​က စတင်ဖွင့်​လှစ်​နေတယ်လို့​ သံတွဲမြို့​ခံတဦး​က ​ပြောပြပါတယ်။
နယ်စပ် ​မောင်း​တောမှာ​တော့​ အိမ်အပြင်ထွက်သူ ရာဂဏန်း​အောက်သာ ရှိ​သေး​တယ်လို့​ မြို့​ခံအမျိုး​သမီး​တဦး​က ​ပြောပြပါတယ်။ နယ်စပ်ကုန်သွယ်​ရေး​ ရပ်တန့်​နေသလို နယ်စပ်ကုန်သွယ်​ရေး​ကို အမှီပြုတဲ့​ ဆိုက်ကား​သမား​တွေ​ရော၊​ လက်လုပ်လက်စား​တွေအဖို့​ အလွန်အမင်း​ စား​သောက်​နေထိုင်​ရေး​ ခက်ခဲ​နေတယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တလွှား​မှာ အ​ရေး​ပေါ်အ​ခြေအ​နေ ​ကြေညာထား​ပြီး​ ပိတ်ထား​တဲ့​ကျောင်း​နဲ့​ တက္ကသိုလ်​တွေကို လာမယ့်​ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်​နေ့​မှာ ဖွင့်​လှစ်မယ်ဆိုတဲ့​ သတင်း​တွေ ထွက်​နေပါတယ်။ ​ဒေသခံ​တွေကို ​မေး​မြန်း​ချက်အရ ​ကျောင်း​တွေဖွင့်​လှစ်တယ် ဆိုရင်​တောင် ​ကျောင်း​သား​တွေ တက်​ရောက်နိုင်​ရေး​ အတွက် လုံခြုံ​ရေး​အစီအမံ​တွေ လိုအပ်တယ်လို့​ ​ထောက်ပြ ​ပြောဆိုပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:30
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ပေါက်​တောတွင် ​လှေ​မှောက်၊​ လူ ၄၀ နီး​ပါး​ ​သေဆုံး . All Rights Reserved